Ny olana momba ny hafanana sy ny toetrandro ary ny toetr'andro - Ikkaro
firosoana >> Lohahevitra hafa >> Hafanana ao an-trano, toetrandro ary toetr'andro
Zava-misy ny fiovan'ny toetrandro. Manomboka mahita ny vokany isika. Manomboka mahalala izay ho avy isika. Isaky ny mandinika trangan-javatra faran'izay mafy kokoa isika, saingy tsy isalasalana fa ny zavatra hitantsika indrindra dia ny fiakaran'ny maripana.
Sarotra ny vahaolana ary tsy azon'ny olon-tsotra atao. Saingy angamba isika izay tia "manaratsy", ny DIY, mpamorona, mpanamboatra, mpijirika (tsirairay izay tafiditra ao na aiza na aiza no tadiavin'izy ireo), dia afaka manatsara zavatra manodidina antsika miaraka amin'ny hevitra, fanavaozana ary fanovana.
Ity lahatsoratra ity dia hifantoka amin'ny toetrandro sy rivotra iainana ao an-trano. Manantena aho fa hanohy ity andiany ity amin'ny iray hafa momba ny toetrandro sy ny maritrano ary ny maritrano adaptive ary angamba ny sasany manokana momba ny fiovan'ny toetrandro, miaraka amina fampahalalana sy data marobe izay angoniko.
Fanamafisam-peo ao an-trano
Ny Laboratoara Fiantraikan'ny Toetr'andro (toetran'ny klimatôlôgy) dia naminavina fa amin'ny fivoarana ara-toekarena amin'ny 2099 dia efa lasa ankapobeny ny fampiasana aircon. Ny sampana iraisam-pirenena momba ny angovo dia manantena ny hiakatra hatrany amin'ny 1.600 miliara ny isan'ny mari-pana amin'ny rivotra an-trano manomboka amin'ny 5.600 miliara ankehitriny amin'ny tapaky ny taonjato ity.
Izy io dia mantsaka vata fampangatsiahana rano amin'ny alàlan'ny coil etona ao anaty fitaovana fananganana. Rehefa lasa gazy ao anaty coil izy dia mifoka hafanana sy hamandoana avy amin'ny rivotra. Etsy ivelany, ny compresseur, ny condenser ary ny mpankafy no mamadika ny gazy ho lasa cairite, mamoaka ny hafanana sy ny rano miangona.
Ny hydrofluorocarbons izay matetika ampiasaina amin'ny vata fampangatsiahana dia entona entona.
Ny rivotra mahazatra mahazatra dia tsy manala hafanana, fa ny ivelany ihany no roahany.
Mandany herinaratra be dia be izy ireo: manodidina ny 8,5% amin'ny fanjifàna eran-tany. Ny ankamaroan'io angovo io dia miteraka famokarana solika fôsily hatrany.
Tamin'ny taona 2016, namoaka CO1.130 2 tapitrisa taonina ny fifehezana rivotra ary antenaina fa amin'ny 2050 dia ho avo roa heny izy io.
Fanamafisana ny fanjakana (Mety ho an'ny fampiharana eo an-toerana toy ny fampangatsiahana fantsom-soda.
Fanamafisana ny taratra: Varavarana mifono vy nanomaterialy izay mamily ny hafanan'ny masoandro ary mamelatra azy hiverina amin'ny habakabaka amin'ny halavan'ny halavan'ny infrared izay mamakivaky ny habakabaka.
Fampangatsiahana condenser amin'ny rano fa tsy rivotra.
Tube mangatsiaka avy amin'i Forrest Meggers. Tsy mampangatsiaka ny rivotra ao anaty efitrano io. Mampamangatsiaka ny olona izy io amin'ny alàlan'ny fitrandrahana ny hafanana miposaka amin'ny hodiny amin'ny fantsom-pantsakan'ny rindrina.
Arakaraky ny mahantra azy ireo no tsy dia vonona hiady amin'ny hafanana. Fahasarotana lehibe kokoa amin'ny fidirana amin'ny rivotra sy ny faritra maitso.
Trano tsy dia mitokana sy antitra ary toerana onenan'olona maro. Tsy misy hazo na faritra maintso ao amin'ny manodidina azy ireo ary ny hafanana rehetra dia miposaka avy amin'ny asfalta sy ny sisin-dalana.
Fanamarihana vitsivitsy sy zava-misy momba ny mari-pana sy ny olombelona
Fahavaratra 2003. onja hafanana lehibe. Tany Frantsa dia maty 15.000, Italia 20.000 ary nanerana ny kaontinanta eropeana 70.000. Io no fahavaratra mafana indrindra tany Eropa tao anatin'ny 500 taona.
Ny vahaolana dia ny fampihenana ny entona entona entintsika.
Tamin'ny 2100 ny isan'ny maty mifandraika amin'ny hafanana dia mety mihoatra ny 100k any Etazonia, hoy ny National Geographic (tsy haiko hoe inona ny loharano)
Ny vokatry ny hafanana be:
Fihetseham-po bebe kokoa amin'ny fahaterahana aloha loatra
ambany lanja sy fiterahana
misy fiantraikany amin'ny toe-tsaina, fitondran-tena ary ny fahasalamana ara-tsaina
Ny toetr'andro mafana dia midika fitomboan'ny herisetra amin'ny sehatra sosialy rehetra.
Nandritra ny 10.000 taona lasa, ny maripana antonony isan-taona dia 12,8ºC (tsy haiko hoe avy aiza koa ireo angona ireo. Omeko ny fahatokisana avy amin'ny lahatsoratry ny magazine)
Mari-pana mando: Izy io dia refy mitambatra amin'ny mari-pana sy ny hamandoana izay mitaky ny vokan'ny fihenan'ny etona. Rehefa lehibe kokoa noho ny 35ºC izy dia maty ny olona aorian'ny fipoahan'ny ora vitsivitsy.
Amin'ny ho avy dia hisy safidy maromaro, hifindra monina na hijanona ary hampifanaraka.
Any Phoenix (Arizona) 37,8ºC dia mihoatra ny 110 andro isan-taona.
Toeram-pialofana mafana (tranomboky, sekoly, ivon-toerana zokiolona ary trano hafa misy vata fampangatsiahana)
Maritrano mifanaraka amin'ny toetrandro.
1 Fanamafisam-peo ao an-trano
1.4 Haavo sosiolojika
2 Fanamarihana vitsivitsy sy zava-misy momba ny mari-pana sy ny olombelona